Xildhibaan Mahad Salaad muxuu ka yiri Heshiisyadda ay Xukuumadu daliishatay Maanta,? Akhriso Nuqulka Heshiiska la daliishaday. – Hornafrik Media Network
Xukuumadda Somalia waxay Maanta daliishatay Heshiis ay sheegtay in Xildhibaan Mahad Salaad oo ahaa Wasiiru Dowlihii Madaxtooyadda Somalia uu ku saxiixay Jigjiga, Waxaana Heshiiskaasi uu ahaa mid quseeyay Beelo ku dagaalamay Xadka Somalia iyo Itoobiya. mana ahayn mid Dowladeed sida aad ku arki kartaan Nuquladda Heshiisyaddaasi.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa markii ay Xukuumaddu daliishatay Heshiis ay ku sheegeen in isaga uu u saxiixay Dowladii hore ee Somalia waxa uu soo saaray Warsaxaafadeed uu kaga jawaabayo arrintan, iyadoo kadibna aad akhrisan doontaan Nuqulo ka mida Heshiiska ay Dowladdu daliishatay.
Heshiisku waxa uu ka koobnaa 8 qodob, dhamaantiisna waxa uu quseeyay dagaaladii bishii May 2015 ku dhex maray ciidmada Liyuu Police iyo dadka deegaanka ee Gobolada Qoraxay iyo Galgadud ee ka kala tirsan maamulada Kilinka Shanaad iyo Galmudug.
Qaabka aan meesha ku tagnay wuxuu ahaa qaab beeleed, sababtoo ah Aniga, Ugaaska, Gudoomiyaha Gobolka iyo Odoyaasha Dhaqanka dhamaanteen dad meel kasoo wada jeeda ayaan ahayn.
Sababta anigu aan u tagayna waxay ahayd deegaanada Galmudug oo markaasi aan lahayn Maamul iyo aniga oo Xildhibaan u ahaa dadka meesha dhibku ku gaaray.
Qodobka ay daliishanayaan waxa uu u qornaa sidaan: In cadowga labada dhinac sida Alshabaab iyo UBBO iyo adeegayaasha wadamada shisheeye ee cadow ku ah deganaanshaha iyo nabadgelyada labada dhinac si wada jir ah ula dagaalamayaan labada dhinac ee heshiiyay. Waxayna ku timid arintaani sheegashada madaxda iyo saraakiisha DDS in meesha waxa ka dagaalamaya ay yihiin Alshaab iyo UBBO taasoo ahayd propaganda laga fidinayay dadka deegaanka. Mana quseynin qodobkaani deegaan ka baxsan meesha diriirtu ka dhacday.
Heshiis Xukuumada magaceeda aan ku galay ma ahayn. Barlamaana lama geynin maadaaba arintu ay qusaysay deegaan gaar iyo dad gooni ah oo qaab beeleed u abaabulnaa.
Sidoo kale heshiiska xagee uga jirtaa maxaabiis la isweedaarsanayo iyo eedaysaneyaal la isu soo celinayo. Abdikariim Qalbi Dhagax iyo kooxdiisa hadii heshiiskaani quseeyay maxaa loogu dabiqi waayay sadex dii sano ee la soo dhaafay reer Mogadishu ayuu ahaa Abdikariim?
Sida ku cad Qodobka 37aad, Faqradiisa 1aad iyo 2aad ee Dastuurka KMG iska dhaaf muwaadin Soomaali ahe xitaa qofka ajnabiga ah ee qaxootinimo kusoo gala Jamhuuriyada Soomaaliya dib looguma celin karo dalkii uu ka yimid hadii ay jirto cabsi muuqata inuu la kulmayo ciqaab.